Nokia9သည် ၂၀၁၇ ၏တတိယသုံးလပတ်တွင် ၇၄၉ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည် Androidsis
Nokia9ကို ၂၀၁၇ တတိယသုံးလပတ်မှာ ၇၄၉ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချမည်
Elvis bucatariu | | Android ထုတ်ကုန်များ
သုံးသစ်ကို Nokia စမတ်ဖုန်း ( Nokia က 3, Nokia5နှင့် Nokia 6) လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းထွက်ပေါ်လာရန်ရှိနေသေးသော်လည်းကုမ္ပဏီ၏ပရိသတ်များကကြေငြာခြင်းမရှိသေးသည့်ကုမ္ပဏီ၏မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိလိုကြသည်။
ယခုအချိန်တွင် Nokia တံဆိပ်အတွက်တာ ၀ န်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီ HMD ကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ယခုနှစ်လယ်ပိုင်းသို့မဟုတ်အဆုံးတွင်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းများကိုသိမ်းဆည်းပါအထူးသဖြင့်ဤအချိန်ကတည်းကပင်ဇာတ်ကောင်များသည် Samsung, LG နှင့် HTC တို့၏အထင်ကရနေရာများဖြစ်သည်။
သို့သော် HMD သည် Galaxy S8, LG G6 နှင့်အသစ်များကိုအပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်စီစဉ်နေသည် HTC ကဦးက Ultraဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်သြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်း Nokia9ကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်စီစဉ်နေချိန်တွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ နှောင်းပိုင်းတတိယသုံးလပတ်သို့မဟုတ်ပင်နှောင်းပိုင်းတွင် 2017.
1 ဥရောပနှင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိ Nokia9၏စျေးနှုန်းများနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်
2 ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ ၉
ဥရောပနှင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိ Nokia9၏စျေးနှုန်းများနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်
၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် Nokia9နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များအရ၎င်းသည်ထင်မြင်ချက်ရှိသည် ကုမ္ပဏီ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ကိုဥရောပတွင်ယူရို ၇၄၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အနည်းငယ်ဈေးသက်သာလိမ့်မည်။ 699 ဒေါ်လာ.
အိန္ဒိယကဲ့သို့သောအခြားစျေးကွက်များတွင် Nokia9သည်ရူပီး ၄၄,၉၉၉ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၇၀၀ ခန့်နှင့်ညီမျှသည်။ အမေရိကန်များကမိုဘိုင်းအတွက်ပေးရမည့်ပမာဏအတိုင်းဖြစ်သည်။
Nokia9သည်တတိယသုံးလပတ်အကုန်အထိဈေးကွက်သို့ ၀ င်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် Qualcomm Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာများရှားပါးမှု။ ထို့အပြင် Nokia9သည်လာမည့်လများအတွင်း HMD မှစတင်မိတ်ဆက်မည့်တစ်ခုတည်းသောစမတ်ဖုန်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ဖင်လန်ကုမ္ပဏီသည်အခြားမော်ဒယ်များကိုစတင်ရန်ရည်ရွယ်ထားပြီးယခုနှစ်ကုန်အထိထုတ်ကုန်အသစ် ၆ ခုသို့မဟုတ် ၇ ခုထည့်သွင်းရန်ရှိသည်။
မကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည့်အချက်အလက်များအရ Nokia9သည်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်လိမ့်မည် အသံနည်းပညာ Nokia OZO အသံ, ဒါပေမယ့်လည်းမျက်နှာပြင်ဆောင်ခဲ့ ဦး မည် ၅.၅ လက်မ Quad HD OLED, RAM 6GBသိုလှောင်ရန်အတွက် 64 သို့မဟုတ် 128GB သိုလှောင်ရန်နေရာဖြစ်နိုင်သည် ၂၂ megapixel ကင်မရာနှစ်လုံးသည် Carl Zeiss မှဖြစ်သည် 12 megapixel resolution selfie ကင်မရာလည်းပါဝင်သည်။
ယခုအချိန်အထိထွက်ပေါ်လာသောသတင်းများအားကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါက HMD သည် Nokia 3800 သို့ Iris Scanner, fingerprint sensor, 68mAh ဘက်ထရီနှင့် IP9 အသိအမှတ်ပြုမှုများကိုထည့်သွင်းပေးလိမ့်မည်။
ဤတွင် Nokia9၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
၅.၅ လက်မ OLED QHD မျက်နှာပြင်
Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာ
ဂရပ်ဖစ် Adreno 540
22 megapixel dual dual lens ပါသည့် Carl-Zeiss ကင်မရာ
ရှေ့ကင်မရာ 12 megapixel
RAM ကို6GB အထိ
သိုလှောင်ရန်နေရာ 64 / 128GB
လျင်မြန်စွာအားသွင်း 3800 နှင့်အတူ 4.0 ဘက်ထရီ
Nokia OZO အသံနည်းပညာ
အန်းဒရွိုက် 7.1.2 Nougat
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Nokia9ကို ၂၀၁၇ တတိယသုံးလပတ်မှာ ၇၄၉ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချမည်
ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော Galaxy Note7၏ပထမဆုံးဓာတ်ပုံများပေါ်လာသည်